Ampanihy Ouest: Efa samy ao Tsimbazaza ny ila-tongotr'i Idéalson sy Marco Tsaradia
mercredi, 05 juin 2019 11:16
Horaketin’ny tantaram-pifidianana eto Madagasikara, indrindra ny eto Ampanihy Ouest, ny fifidianana solombavambahoaka tamin’ity 2019 in-dray mitoraka ity.
Toerana solombavambahoaka roa no ifaninanana ato amin’ity Distrika ity. Raha ny fironana hita amin’ny tranokalan’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana na CENI dia mazava be ny lalan’ny kandida tsy miankina Idéalson sy Marco Tsaradia, mpiray lisitra aminy ho eny Tsimbazaza.
Nahavita pao-droa ny lisitra “Indépendant Idéalson” laharana faha-5 tao amin’ny biletà tokana ! Izay no mahalaza azy. Goavana rahateo, 15.000 be izao, ny elanelam-bato manasaraka azy roalahy (27 828) miohatra amin’ny azon’ny kandida tsy miankina iray (12 924) manaraka vonjimaika azy ireo, avy amin’ireo biraom-pifidianana miisa 414 amin'ny 443 manerana an’Ampanihy Ouest.
Efa samy ao Tsimbazaza ny ila-tongotr’i Idéalson sy Marco Tsaradia. Fanamafisana avy amin’ny CENI sy ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana sisa andrasan’ireo mpomba azy ireo, hanambara ofisialy fa voafidy ho solombavambahoaka tato Ampanihy Ouest, Faritra Astimo Andrefana, i Keron Idealson sy Marco Tsaradia.
Samy manampahaizana izy roalahy ireto ary samy tanora erotrerony. Mpitsara i Idealson, efa nitana andraikitra ambony momba ny lalàna tao amin’ny Prezidansa ity zanak’i Ejeda sy zanak’i Androimpano ity. Efa mpiara-miasa akaiky tamina praiminisitra ihany koa izy ary efa talen’ny kabinetra tamina ministera.
Tanora manampahaizana momba ny vola i Marco Tsaradia. Nandalim-pahaizana tany Eorôpa sy Maroc ity zanak’i Androka sy Itampolo ity. Efa niasa tamina « Cabinet d’audit international » goavana tany Eorôpa izy. Efa mpanolotsaina manokana tao amin’ny Kaominina ambonivohitra Toliara, mpitantana fikambanana tany Bénélux sy eto Madagasikara.
Anisan'ny tanora indrindra amin'ity Andrimpanjakana ity satria dia 31 taona ny lehilahy, nefa manana ny traikefa rehetra amin'ny fitantanam-bola.
Niaraka nanohana ny filoha lany ankehitriny izy mirahalahy, na dia nilatsaka tamin'ny tsy miankina aza avy eo.
Mifameno tsara Idéalson sy Marco Tsaradia ary nifanojo amin’ny nandrasan’ny Vahoakan’Ampanihy Ouest ka heverina fa nahazoan’izy ireo izao vokatra izao. Manamafy izany rahateo ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy tato amin'ity Distrika ity, 62.84% ary io no taha ambony indrindra manerana an’i Madagasikara tamin’ity fifidianana solombavambahoaka ity.